ကားမောင်းနေရင်း တာယာကို မီးရှို့တဲ့အနံ့လို ညှော်နံ့တွေရတာမျိုးကို ကားမောင်းတဲ့သူတော်တော်များများ ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအနံ့ဘယ်ကလာသလဲ၊ ဘာအနံ့လဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကို ကျနော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ကားမောင်းနေရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ကားစီးနေရင်းဖြစ်ဖြစ် လမ်းပေါ်မှာတာယာမီးရှို့ထားတဲ့အနံ့လို စူးစူးဝါးဝါး အနံ့တွေ နံတဲ့အခါမျိုးမှာ ဝါရင့်ကားမောင်းသူတွေကတော့ ကလပ်ပလိတ်ညှော်တာလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကြားဖူးနား၀ ရှိတဲ့သူတွေသိမှာဖြစ်ပေမဲ့ တချို့လည်း ကလပ်ဘရိတ်လား၊ ကလပ်ပလိတ်လားဆိုပြီး မသဲကွဲတတ်ကြပါဘူး။
တကယ်အမှန်က ကလပ်ပလိတ် (Clutch Plate) ကနေ ညှော်နံ့ထွက်တာပါ။ ကျနော်တို့ကသာ လူအများ နားလည်အောင်ခေါ်နေကြ ကလပ်ပလိတ်လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ၊ တကယ့်သူ့နာမည်အရင်းက Clutch Disc လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ကလပ်ပြားပေါ့။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အများခေါ်ဝေါ်နေကြ ရင်းနီးပြီးသားဖြစ်နေကြ နာမည်ဖြစ်တဲ့ ကလပ်ပလိတ်လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပါမယ်။
ကလပ်ပလိတ် (Clutch Plate or Clutch Disc) ဆိုတာဘာလဲ?
ကလပ်ပလိတ်ဆိုတာ တကယ်တော့ Manual Gear ကားတွေမှာ အဓိကသုံးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ကားတွေရွေ့လျားသွားလာနိုင်ဖို့ အဓိက လိုအပ်တဲ့ အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက်ကို ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုချိတ်ဆက်ပေးရတာလဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ကားတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ အင်ဂျင်တွေကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ လည်ပတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအား (Torque) က ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပြီး ကားဘီးတွေကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် မမောင်းနှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကားရဲ့အင်ဂျင်ကနေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို ဂီယာဘောက်တွေဆီကိုပို့၊ ဂီယာဘောက်တွေက ကနေတစ်ဆင့် ကားဘီးတွေကို အနှေးအမြန်လိုအပ်သလို လည်ပတ်စေတာပါ။
ဒီလိုအင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်နှစ်ခုပေါင်းမှ ကားက ရှေ့ ဒါမှမဟုတ် နောက်ကို သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက် နှစ်ခုက အဆက်အသွယ် အချိတ်အဆက်လုပ်ပေးမယ့် အရာဝတ္တုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာဝတ္တုကတော့ ကျနော်အခုပြောမယ့် ကလပ်ပလိတ်ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလပ်ပလိတ်တွေကို များသောအားဖြင့် Heavy Duty Organic, Ceramic, Kevlar, Feramic အစရှိတဲ့ ပွတ်တိုက်ပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည်မြင့်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ကားမောင်းတဲ့သူက Clutch Pedal ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့ ကလပ်အပေါ်ဆုံမှာရှိတဲ့ Hydraulic Oil တွေက အပေါ်ဆုံကနေတစ်ဆင့် ကလပ်အောက်ဆုံမှာရှိတဲ့ Piston ကိုရောက်ရှိပြီး ကလပ်ပြားနဲ့ဆက်စပ်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကလပ်ဖောက်တွေ၊ ကလပ်ဘောတွေကို တွန်းကန်ခြင်းအားဖြင့် ကလပ်ပြားနဲ့ အင်ဂျင်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Flywheel ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပေးပါတယ်။ ကလပ်နဲ့ အင်ဂျင် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကားမောင်းသူက လိုအပ်တဲ့ဂီယာအမျိုးအစားကိုထိုးပြီး Clutch Pedal ကို ပြန်လည်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကလပ်ပလိတ်နဲ့ Flywheel ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိစေပြီး အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကိုချိတ်ဆက်မိစေကာ ကားကို ရှေ့သို့၊ နောက်သို့ အနှေးအမြန်လိုအပ်သလို ရွေ့လျားသွားစေပါတယ်။
ဒါကတော့ အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကြားထဲမှာ ကြားခံအချိတ်အဆက်ဖြစ်တဲ့ ကလပ်ပလိတ် အလုပ်လုပ်ပုံလေးကို အကျဉ်းချုံးရှင်းပြထားတာပါ။ ဒါဆိုဘာလို့ ကလပ်ပလိတ်တွေက ညှော်နံ့တွေထွက်ရတာလဲဆိုရင်တော့ အဖြစ်များဆုံး ကလပ်ညှော်နံ့ထွက်ရတဲ့အကြောင်းက ကားမောင်းတဲ့သူတွေက Clutch Pedal ဆိုတဲ့ ကလပ်ခြေနင်းပြားပေါ်မှာ မလိုအပ်ဘဲ ခြေထောက်တင်တဲ့အလေ့အထကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်အများဆုံး ကလပ်ညှော်နံ့ထွက်ရတာပါ။ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ ကလပ်ခြေနင်းပြားဆိုတာ ကားမောင်းတဲ့သူက ဂီယာတစ်ခုကနေတစ်ခု အရွှေ့အပြောင်းမှာ အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက်ကို အချိတ်အဆက် ခေတ္တခဏဖြတ်တောက်ပေးဖို့အတွက်ပဲ နင်းရတာပါ။
ကားမောင်းသူက လိုအပ်တဲ့ဂီယာထိုးပြီးလို့ ကလပ်ခြေနင်းကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါ ကလပ်ပလိတ်နဲ့ Flywheel တို့ ချိတ်ဆက်မိသွားပြီးရင် ကလပ်ခြေနင်းကို နောက်ထပ်ဂီယာမပြောင်းမချင်းလွှတ်ထားရမှာပါ။ ဂီယာအရွှေ့အပြောင်းလုပ်စရာမလိုဘဲ ကလပ်ခြေနင်းကို ခဏခဏနင်းနေဖို့မလိုပါဘူး။ တချို့ကားမောင်းသူတွေက ဒါကိုသတိမမူဘဲ ကလပ်ခြေနင်းပေါ်ကို ခြေထောက်မှေးတင်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှေးတင်ထားတဲ့အတွက် ကားမောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် ကလပ်ပြားဟာ Flywheel နဲ့ ကပ်လိုက် ကွာလိုက် မထိတထိ ခဏခဏ ဖြစ်ပြီး ကလပ်ပလိတ်ပြားမှာရှိတဲ့ နံရံတွေပွန်းစားကုန်တာပါပဲ။
လမ်းပေါ်မှာ ကားမောင်းနေရင်း၊ ကားစီးနေရင်း မကြာမကြာရတဲ့ တာယာမီးရှို့တဲ့အနံ့လို ညှော်နံ့ဟာ ဒီလိုကလပ်ပလိတ် ထိလိုက်လွတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေ ကလပ်ပလိတ်ပြားနဲ့ Flywheel ပွတ်တိုက် ပွန်းစားမှုကနေ ထွက်ပေါ်ပါတယ်။
ဒါက အဖြစ်များဆုံး ကလပ်ပလိတ်ပြားညှော်နံ့ထွက်စေတဲ့အချက်ပါ။ နောက်တစ်ချက်က ကားနဲ့ ဝန်ရုန်းအား မမျှရင်လည်း ဒီလို ကလပ်ပလိတ်ပြား ညှော်နံ့တွေထွက်စေပါတယ်။ ကားရဲ့အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ရဲ့ ရုန်းနိုင်တဲ့ ဝန်တွေထက်ပိုများရင် ကားအင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားတွေကို ဂီယာဘောက်ဆီကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အခရာဖြစ်တဲ့ ကလပ်ပလိတ်ပြားဟာ လိုအပ်တာထက် ဝန်တွေကို ညှစ်ရုန်းရတဲ့အတွက် ကလပ်ပလိတ်ပြားလောင်ပြီး ညှော်နံ့ထွက်စေပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက ကလပ်ပလိတ်ပြား ညှော်နံ့ထွက်စေတဲ့ အဓိက အချက်လေးတွေပါ။ နောက်ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ ကလပ်ပလိတ်ပြား သက်တမ်းကုန်လို့ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကလပ်ပလိတ်ပြား ချို့ယွင်းလို့ဖြစ်စေ ကားမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာလေးတွေပါပဲ။ ဒါလေးတွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကားကလပ်ပလိတ်ပြား လုံးဝမကုန်ခင် နီးစပ်ရာဝပ်ရှော့မှာ အမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကားမောင်းတဲ့သူက ဂီယာထိုးလိုက်လို့ ကလပ်ခြေနင်းကို နင်းလိုက်တဲ့အချိန် ကလပ်က လိုအပ်သလောက် မာမနေတော့ဘဲ ကလပ်အရမ်းပျော့သွားတာ၊ ကလပ်ပျော့ဆင်းသွားတာတွေကလည်း ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေ ကုန်နေပြီဆိုရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဒီရောဂါလက္ခဏာမျိုးက ကလပ်ဆုံဝါရှာတွေ ယိုစိမ့်တာ ပေါက်တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဖြစ်တတ်တာမို့ ဒီလိုကလပ်ပျော့သွားတာမျိုးကြုံလာ ရတယ်ဆိုရင် နီးစပ်ရာကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ သွားရောက်စစ်ဆေးရမှာပါ။
ကလပ်ချော်တယ်ဆိုတာကတော့ ကလပ်ခြေနင်းကို နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကလပ်ပလိတ်ပြားဟာ Flywheel နဲ့လုံးဝလွတ်နေရမှာဖြစ်ပြီး ၊ ကလပ်ခြေနင်းကို လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကလပ်ပလိတ်ပြားနဲ့ Flywheel တို့က သေချာချိတ်ဆက်နေရမှာပါ။ အဲဒီလိုမဖြစ်ဘဲ ကလပ်ခြေနင်းကို လွှတ်လိုက်ပြီးသည့်တိုင် ကလပ်ပလိတ်ပြားနဲ့ Flywheel တို့ သေချာမထိကပ်ဘဲ လွတ်လိုက်ကပ်လိုက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကလပ်ချော်တာမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါမျိုးကို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ သေချာမြင်ရသလဲဆိုရင်တော့ ကားရဲ့အင်ဂျင်က RPM တော်တော်လေးကိုတက်နေတဲ့အချိန် ကားကလည်း လိုအပ်တဲ့ ဂီယာထိုးထားရဲ့သားနဲ့ ကားရဲ့အရှိန်က မဆွဲဘူးဆိုတာမျိုးဟာ ကလပ်ပြားတွေချော်နေရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတစ်မျိုးပါ။ နောက်တစ်ချက် ကားက ဝန်နဲ့ရုန်းရတဲ့အချိန်၊ ကုန်းတက်တွေ တက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ကားအင်ဂျင်အရှိန်ကိုမလိုက်နိုင်ဘဲ အဆွဲအရုန်းကျသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်း ကလပ်ပြားတွေ စလစ်ဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။
၃။ ဂီယာအရွှေ့အပြောင်း၊ အကူးအပြောင်းခက်ခဲတာ
နောက်ကလပ်ပြားတွေ ပျက်စီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုက ဂီယာအရွှေ့အပြောင်းတွေ အကူးအပြောင်းတွေမှာ ရုတ်တရက် လိုက်လံမပြောင်းလဲတတ်တာမျိုးဟာလည်း ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေ ပျက်စီးရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
၄။ ကလပ်အုံထဲက အသံထွက်တာ
ကလပ်ပြားတွေ ပွန်းစားနေရင် ပျက်စီးနေရင် အဖြစ်များဆုံး အချက်တစ်ခုက ဂီယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရွှေ့အပြောင်းတွေမှာ ဆူညံသံထွက်တာ၊ ပွတ်တိုက်တဲ့အသံတွေ ထွက်လာတာမျိုးကလည်း ကလပ်ပြားတွေ ကုန်သွားရင်၊ ပွန်းစားသွားရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
ဒီအချက်တွေက ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေ မကောင်းတော့တာ ဒါမှမဟုတ် ကလပ်ပြားနဲ့ပတ်သက်ဆက်စပ်တဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ ချို့ယွင်းသွားရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖြစ်များဆုံး ရောဂါအခြေနေတွေပါ။
ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေ ပွန်းစားမှုသက်သာအောင် ဘယ်လိုမောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ?
၁။ ကလပ်ခြေနင်းပေါ် ခြေမှေးတင်တာ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ကလပ်တွေကို သက်တမ်းကြာရှည်အောင် အသုံးပြုဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအချက်က ကလပ်ခြေနင်းပေါ် ခြေထောက်မှေးတင်တဲ့အကျင့်တွေရှိရင် လုံးဝဖျောက်ဖို့လိုအပ်တာပါ။ ကလပ်ခြေနင်းဆိုတာ ဂီယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပြောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှသာ နင်းရမှာဖြစ်ပြီး ဂီယာထိုးပြီးတဲ့အချိန် ကလပ်ခြေနင်းပေါ်ခြေထောက်မှေးတင်ထားတာမျိုး လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကလပ်ခြေနင်းအပေါ် ခြေထောက်မှေးတင်ထားပါက အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေ ပွန်းစားပြီး ကလပ်ပလိတ် လောင်တာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
၂။ ဂီယာအရွှေ့အပြောင်း သတိပြုပါ
ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေရဲ့သက်တမ်းက ဂီယာအရွှေ့အပြောင်း ဘယ်လောက်များများပြုလုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုပြုလုပ်သလဲ ဆိုတာအပေါ်မှီခိုနေတာပါ ။ ဂီယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရွှေ့အပြောင်းကို မလိုအပ်ဘဲ ကစားတာ၊ နောက် ဂီယာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအရွှေ့အပြောင်းမှာ ညင်ညင်သာသာ မပြုလုပ်တာတွေကြောင့် ကလပ်ပလိတ်ပြားတွေရဲ့သက်တမ်းကို တိုစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂီယာအရွှေ့အပြောင်းကို သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ညင်ညင်သာသာ ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
၃။ ကားရပ်တဲ့အခါ Parking Brake ကိုသုံးပြီး ရပ်ပါ။
ကားရပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Parking Brake (ဟန်းဘရိတ်) ကိုဆွဲပြီးရပ်တာ၊ လိုအပ်ပါက ဂျမ်းတုံးခုတာ မျိုးတွေကလည်း ကလပ်ပလိတ်တွေရဲ့သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယာဉ်နဲ့ ကုန်တန်ချိန်မြင့်တဲ့ ကားတွေမှာ ကားရပ်တဲ့အခါ Parking Brake မသုံးဘဲ ရပ်တန့်ထားပါက လမ်း အတိမ်းအစောင်းအခြေအနေတွေကြောင့် ယာဉ်နဲ့ ကုန်ဝိတ်တွေဟာ ကားရဲ့ကလပ်ပလိတ်ပြားပေါ်ကို သွားသက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလပ်ပလိတ် သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေချင်တယ်ဆိုရင် ကားရပ်တဲ့ အခါ Parking Brake သုံးပါ၊ လိုအပ်ပါက ဂျမ်းတုံးခုပေးပါ။
ဒီအချက်တွေက ကလပ်ပလိတ်ညှော်နံ့ထွက်တာက စလို့ ၊ Manual ကားမောင်းသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံကျတဲ့ ကလပ်ပလိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကုန်တင်ယာဉ်ကားကြီးတိုင်းလိုလို Manual Gear အမျိုးအစားကားတွေဖြစ်တာမို့ ကလပ်ပလိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံလေးတွေကိုသိထားခြင်းအားဖြင့် ကလပ်ပလိတ်မတော်တဆ ပျက်စီးမှုကြောင့် လမ်းခရီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။
Jaguar E-Pace 2019 Review
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၃.၃.၂၀၂၀) မှ (၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း